Ogaden News Agency (ONA) – Wargaysyada Turkiga oo Wax Kaqoray Xaalada Muslimiinta Itoobiya.
Wargaysyada Turkiga oo Wax Kaqoray Xaalada Muslimiinta Itoobiya.
Posted by Dulmane	/ May 30, 2017
Qaar kamid ah warbaahinta wadanka turkiga oo kadayriyay xaalada muslimiinta kudhaqan wadanka gumaysiga Itoobiya.
2 wargays oo kasoo baxa wadanka Turkiga ayaa maalin nimadii shalay bogogooda hore kusoo daabacay qormo aad udheer oo muujinaysa in ay dhibaatooyin aad ubadan ku jiraan muslimiinta wadanka Itoobiya.
Wargayska Daily Star oo kamid ah wargaysyada loogu akhriska badan yahay wadanka Turkiga ayaa sheegay in uu waraysi kaqaaday qaar kamid ah muslimiinta Itoobiya kuwaas oo sida wargaysku uu daabacay sheegay in ay qabaan cadaadis aad uwayn oo ay kala kulmaan ciidamada gumaysiga Itoobiya iyo maamulada lagu adeegto ee Gobolada jooga.
Wargayska ayaa intaas kudaray in dadka muslimiinta ah ee Itoobiya oo tiro ahaan lagu sheegay 43 milyan ay lakulmaan cadaadis dhinaca siyaasada iyo diinta ah waxaana muslimiinta Itoobiya loogu caga jugleeyaa in ay yihiin dad argagixiso ah waa sida uu wargaysku qoray e.
Wargayska oo hadalkiisa siiwatay ayaa sheegay in hay’adaha samafalka ee wadanka Turkigu ay caawiyeen 1500 oo qays oo muslimiinta Itoobiya ah kuwaas oo sida uu wargaysku sheegay la afuriyo.
Wargayska oo cadaymo waawayn soo qaadanaya ayaa sheegay in dadka muslimka ah ee Itoobiya kudhaqan ay yihiin kuwa ugu badan ee dhibaatooyinku ay soo gaadhaan, wuxuuna wargaysku sheegay in abaaraha iyo cuduraduba ay saameeyeen dadka muslimiinta ah oo aan haysanin wax daryeel ah.
Sidoo kale wargayska ayaa intaas kudaray in hay’adaha wadanka Turkigu ay caawinayaan dadka ay daadadku wax yeeleeyeen oo muslimiin ubadan sida uusheegay wargaysku.